Yenza izixhobo zingasebenzi ngesikripthi kwiWindows > UVielhuber uDavid
Yenza izixhobo zingasebenzi ngesikripthi kwiWindows10
Ukuze wonge umbane okanye unciphise imeko yakho yokujonga esweni, kuyacetyiswa ukuba uzikhuphe ngokupheleleyo izixhobo ezingasetyenziswanga kwikhompyuter yakho. Izixhobo ezinjengebhokisi yesandi okanye ii-webcams zinokusebenza / zingasebenzi ngendlela yeklasikhi usebenzisa umphathi wesixhobo. Yonke le nto iyasebenza ngeskripthi. Indlela esemgangathweni yokwenza oku yayiqhele ukuba yi- devcon . Windows 10 ngoku inika indlela elula yokwenza oku ngePowerShell .
Kuqala uya kugqiba igama okanye isazisi sehardware ngomphathi wesixhobo (cofa ekunene kwisixhobo eso> Iinkcukacha> Inkcazo yesixhobo / ii-ID zekhompyutha) Ngenye indlela, ungasebenzisa i-PowerShell command Get-PnpDevice -PresentOnly . Ngoku uyila iskripthi sePowerShell elandelayo:
Iskripthi sibonisa ngokuzenzekelayo incoko yababini ye-UAC kuba ifuna amalungelo olawulo kwaye ngoku banokubizwa ngolu hlobo lulandelayo:
I-XXX imele igama okanye isazisi sehardware, YYY ngamaxabiso anikwe amandla okanye akhubaze (uhlobo lunokungashiywa, emva koko imeko yangoku ichaswe kwimeko nganye). Ukubiza yonke into ngokufanelekileyo ngekhonkco, yenza ngoku kulandelayo:
I-Autostart ngokucwangcisa umsebenzi (kunye neenketho "Ukuphunyezwa ngokuzimeleyo kolawulo lweakhawunti yomsebenzisi" kunye "nelona lungelo liphezulu") okanye ulawulo ngee-hotkeys zebhodi yezitshixo zinokwenzeka ngokulula ngesixhobo esifana nesidenge , umzekelo.